ကျောက်သင်ပုန်းလေးတွေနဲ့ သဘာဝဆန်ဆန် ရိုးရှင်း စွာ ဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Pre Wedding ပုံလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုး – XB Media & News
အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားကြသလို ပွင့်လင်းတဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ စကားပြောဟန်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေတစ်ခဲနက် အား ပေးချစ်ခင်နေကြသူလေးတွေကတော့စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့ကတော့ ကြည်နူးစရာကောင်းသလို ပျော်စရာလည်းကောင်းလွန်းတဲ့ အချစ်ရေးလေးကို နှစ်ယောက်အတူဖြတ် သန်းနေကြပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စနောက်ကာ ပျော်ပျော်နေကြတတ်ကြတဲ့အပြင် ပွင့်လင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အားကျချစ်ခင်နေကြတာပါ ။
အခုလည်း ကျောက်သင်ပုန်းလေးတွေနဲ့ သဘာဝဆန်ဆန် ရိုးရှင်းစွာ ဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Pre Wedding ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ” ကျောက် သင်ပုန်းလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်နယ် ဘီလူးကျွန်း မုဒွန်းရွာ ကနေထွက်ပါတယ်…. ခုခေတ်မှာ ကျောက်သင်ပုန်းလေးတွေ မသုံးကြတော့လို့ လုပ်ငန်းတော်တော်များများ ကွယ်ပျောက်သွားပေမယ့်၊
အခုချိန်ထိ ကျန်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကတော့ အမှတ်တရ လက်မှုပစ္စည်း အဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပြီး ရပ်တည်နေကြပါတယ်။ ဒီကျောက်သင်ပုန်း တွေကို အလှဆင်ပစ္စည်း အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မှာယူချင်တယ်ဆိုရင် Aung Moekhine ကျောက်သင်ပုန်းလုပ်ငန်းကနေမှာယူနိုင်ပါတယ်။” ဆိုတဲ့ စာလေးကို အမှတ်တရ ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိထားၾကသလို ပြင့္လင္းတဲ့ေနထိုင္မႈနဲ႔ စကားေျပာဟန္ေလးေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြတစ္ခဲနက္ အား ေပးခ်စ္ခင္ေနၾကသူေလးေတြကေတာ့စိန္ၿဖိဳးလႈိင္နဲ႔ ရီရီပြင့္ျဖဴတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
စိန္ၿဖိဳးလႈိင္နဲ႔ ရီရီပြင့္ျဖဴတို႔ကေတာ့ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းသလို ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္းလြန္းတဲ့ အခ်စ္ေရးေလးကို ႏွစ္ေယာက္အတူျဖတ္ သန္းေနၾကၿပီး တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ စေနာက္ကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနၾကတတ္ၾကတဲ့အျပင္ ပြင့္လင္းတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြက အားက်ခ်စ္ခင္ေနၾကတာပါ ။
အခုလည္း ေက်ာက္သင္ပုန္းေလးေတြနဲ႔ သဘာဝဆန္ဆန္ ႐ိုးရွင္းစြာ ဖန္တီး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ Pre Wedding ပုံေလးေတြနဲ႔အတူ ” ေက်ာက္ သင္ပုန္းေလးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ မြန္ျပည္နယ္ ဘီလူးကြၽန္း မုဒြန္း႐ြာ ကေနထြက္ပါတယ္…. ခုေခတ္မွာ ေက်ာက္သင္ပုန္းေလးေတြ မသုံးၾကေတာ့လို႔ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပမယ့္၊
အခုခ်ိန္ထိ က်န္ရွိေနတဲ့လုပ္ငန္းေလးေတြကေတာ့ အမွတ္တရ လက္မႈပစၥည္း အျဖစ္ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ၿပီး ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ ဒီေက်ာက္သင္ပုန္း ေတြကို အလွဆင္ပစၥည္း အေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အမွတ္တရအေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ မွာယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ Aung Moekhine ေက်ာက္သင္ပုန္းလုပ္ငန္းကေနမွာယူႏိုင္ပါတယ္။” ဆိုတဲ့ စာေလးကို အမွတ္တရ ေရးသားေဖာ္ျပထားရာ ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ ။
အိမ်ကိုဖောက်ထွင်းသွားတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ကွင်းဆက် တရားခံအဖြစ် သားဖြစ်သူကိုပါ နေပြည်တော်မှာ ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ပရိတ်သတ်ကိုပြောပြလာတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်